Ahoana ny fanovana ny fisehoan'ny Terminal amin'ny OS X | Avy amin'ny mac aho
Ny Terminal ao amin'ny OS X dia ilay rindrambaiko ahafahantsika manoratra mivantana ireo torolàlana amin'ny tsipika fandidiana mba hahafahan'ny Mac manao hetsika sasany. Tahaka ny tsipika komandin'ny Windows dia toa Terminal mety tsy tian'ny mpampiasa maro, amin'ny alàlan'ny fanehoana ambadika fotsy misy litera mainty somary spartan, saingy tadidio fa nandao ny interface graphique isika. Soa ihany fa raha tsy mahazo aina amin'ireo loko ireo ianao dia azonao ovaina izany ho an'ny manaitra kokoa izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao na tianao.
1 Ovao ny fisehoan'ny Terminal amin'ny OS X
2 Amboary ireo loko momba ny profil Terminal
Ovao ny fisehoan'ny Terminal amin'ny OS X
Voalohany indrindra dia mila isika misokatra Terminal, na amin'ny Spotlight na amin'ny Launchpad> Hafa.
Raha vantany vao misokatra isika dia tsy mitondra fiara mandra-pahatongan'ny safidinao.
ao anatin'ny safidinao. Ao anatin'ny Prezidansa Terminal no ahitantsika takelaka efatra: Jeneraly, profil, Vondron'ireo varavarankely sy Encodings. Misafidy Jeneraly izahay.
Ny safidy voalohany, Jeneraly, hitantsika rehefa manomboka, manokatra varavarankely vaovao miaraka amin'ny piraofilina dia mampiseho antsika fidinana miaraka safidy hafa: Basic, Grass, Homebrew, Page Man, Novel, Ocean, Pro, Red Sands, Silver Airgel, Colour solid. Basic dia voafantina amin'ny alàlan'ny default, endrika hita maso izay mampiseho ny Terminal amin'ny toerana misy anao, miaraka amina fotsy fotsy sy litera mainty.
Raha te hanova ny endrika hita maso isika dia tsy maintsy misafidy izay safidy rehetra ao asehoy anay izany lisitra izany. Raha te hahita ny fanovana dia mila manidy ny Terminal izahay ary manokatra azy io indray.
Amboary ireo loko momba ny profil Terminal
Raha nanapa-kevitra izahay fa misy ny mombamomba anay misy fa misy zavatra tsy tianay, toy ny karazana kursor, ny lokon'ny varavarankely, ny kiheba ... dia tsy maintsy manatanteraka ireto dingana manaraka ireto izahay:
Vantany vao nosokafantsika ny Terminal, dia mankany safidinao.
Ao anaty ny safidintsika dia mandevona mandra-kiheba mombamomba. Amin'ity fizarana ity dia misy ny mombamomba rehetra azontsika atao ao amin'ny tabilao General, fa tsy toy izany, eto dia azontsika atao ny manova ny endrika hita maso amin'ireo mombamomba azy mba hampifanaraka izany amin'ny zavatra tiantsika na ilaintsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fanovana ny fisehoan'ny Terminal amin'ny OS X